विश्वव्यापी बन्दै नमस्ते
शताब्दीकै ठूलो महामारीले संसारको मानव जीवन संकटमा पारेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नाम दिइएको भाइरसले लाखौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ । संसारभरि नै मानिस घरभित्र बसेर १ जीवाणुुसँगको हतियारविहीन लडाइँमा छन् । यो भाइरस र एकान्तबासको अवस्था कहिले हटेर जान्छ थाहा छैन ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले त नागरिकलाई हात मिलाउनुको सट्टा नमस्ते गर्न अपिल नै गरेका छन् । नमस्तेको कहानी यत्तिमै सकिँदैन, विश्व शक्ति अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमेतले नमस्तेलाई ‘नन–कन्ट्याक्ट ग्रिटिङ्स’ भनी प्रशंसा गरे । कोरोनाबाट बच्न गरिएको नमस्ते भविष्यमा स्वच्छ र सभ्य अभिवादनको विश्वव्यापी मानक बन्ला ? विद्वान्बीच चर्चा भइरहेको छ ।
प्रिन्सटन युनिभर्सिटीका मनोविज्ञान प्राध्यापक अल्क वेबर भन्छन्, ‘मानिसका बानी र व्यवहार आर्थिक सामाजिक सन्दर्भसँगै परिवर्तन हुन्छन् । स्वास्थ्यका लागि बानी परिवर्तन नहुने कुरै छैन । पश्चिमी जीवनशैली हस्त मिलन अर्थात् ह्यान्डसेकबिना कस्तो होला ? परिचर्चा भइरहेको छ ।’
हुन त भौतिक तथा प्राविधिक विकासका उच्चतम अवस्थामा पुगेका देशको दैनिक जीवन यसअघि नै ग्याजेटमा कैद भइसकेको छ ।
कोरोना महामारीमा मानव जाति घरमै थुनिँदा अब साँच्चै डिजिटल डिभाइसको महत्व महसुस भएको हुन सक्छ ।
कोरोना महामारीबीच नै फेसबुकले एउटा इमोटिकनको विकास गरी सार्वजनिक गर्‍यो । मायाको भावमा २ हातले अँगालो हालेको यो इमोको नाम केयर दिइएको छ । जसको अर्थ परिस्थितिले टाढा रहे पनि पर्वाह गरेको छु भन्ने हुन्छ ।
विश्वव्यापी श्रम प्रवाहका कारण नेपालजस्ता देशका युवा लाखौंको संख्यामा विदेशमा छन् तर यस्तो बन्दाबन्दीमा पनि परिवारसँग नजिक गराएको छ, उही फेसबुक, इमो, ह्वाट्सयापले । यसरी हेर्दा खुसी, माया, दयाजस्ता कुराको प्रसार र अभिव्यक्ति पनि अब डिजिटलाइज्ड भएको छ ।
म्यासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीकी प्राध्यापक शेरी टर्कल पनि मानिसले मानवीय गुण डिभाइसमा भरेको विचार राख्छिन् ।
नेपालमै बन्दाबन्दीका कारण इन्टरनेट, बिजुली, पानी, टेलिफोन, डिसहोमको बक्यौता तथा शुल्क तिर्न ई-बैङ्किङ सेवा नलिएकोमा पछुतो मान्ने धेरै छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३०, २०७७, ०६:०८:००